Dagaallo xooggan oo maalintii labaad ka socda Muqdisho, gaystayna khasaare dhimasha iyo dhaawac. [Akhris …] – Radio Daljir
Muqdisho, June 17- Maalintii labaad ayaa dagaallo xooggani waxaa ka soconayaan magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya, kuwaasi oo u dhaxeeyey xaggaga is-bahaystay ee Al-shabaab & Xisbul islaam iyo ciidamadda dawladda KMG ah ee Soomaaliya oo iyana gacan ka helaya kuwa AMISOM.
Dagaalka xooggiisa ayaa saakay ka socda degmada Hodon ee magaalada Muqdisho waxaana laabada dhinac ee dirirtu u dhaxayso ay isku adeegsanayaan hubka noocyadiisa kale oo ay ka mid yihiin madaafiicda goobta, kuwaasi oo mararka qaar ku dhacaya deegaano ka baxsan meelaha la isku hayo.
Inkastoo ay jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac oo ay dagaalladu gaysteen haddana lama oga tirada rasmi ah ee ku waxyeellowday dagaalladii shalay iyo maantaba ka socday gudaha magaalada Muqdisho.
Dhinacyada dagaalladu u dhaxeeyeen ee dawladda iyo xaggaga mucaaradka ah ayaa sheeganaya guulo dagaal oo ay gaareen waxayna ay wax-yar ku tilmaamayaan khasaarooyinka ka soo gaaray dagaalka, hase yeeshee dad goob joogayaal ah oo ku sugan meelaha ay dagaalladu ka socdaan ayaa idaacadda Daljir u sheegay dadka ku waxyeelloobay iska hor imaadyada in ay u badan yihiin kooxaha dagaalku u dhaxeeyey inkastoo ay jiraan khasaarooyin soo gaaray dadka shacabka ah.
Wararka goor dhaweyd ay soo tabiyeen wariyaasha Daljir u jooga magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya dagaalku hadda in uu ku sii fidayo xaafado hor leh oo markii hore ka nabdoonaa colaadda taasi oo suurto gal ka dhigi karta in ay sii badtaan khasaarooyinku.
Dagaalka maanta ayaa dabo socda mid maalintii shalay ahayd ka dhacay deegaanka Galgalato, halkaasi oo ay isku fara saareen ciidanka dawladda iyo kuwa ururka Al-shabaab.
Wixii ka soo kordha dagaalladaasi wararkeenna danbe ayaad ku heli doontaan.